इन्धनको मूल्य फेरि बढ्यो – EKalopati
A petrol pump attendant (L) puts petrol priced at Rs 99 per litre intoacar ataSajha Petrol gas station in Kathmandu, Nepal, January 27, 2016. A dramatic drop in oil prices, driven down byaglut in supply, is translating intoamixed bag for motorists. All countries have access to the same oil prices on international markets, but retail prices vary wildly, largely because of taxes and subsidies. Reuters
६ माघ २०७७, मंगलवार ०८:३२
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले इन्धनको मूल्य बढेको हो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ कायम भएको छ । एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् छ ।
यसअघि प्रति १५ दिनमा इन्धनबाट साढे ६७ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएपछि इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
अहिले कायम हुने नयाँ बिक्री मूल्यअनुसार निगमलाई अझै पनि प्रति १५ दिनमा ५० करोड रुपैयाँ घाटा छ । डेढ महिनाको अन्तरालमा इन्डियन आयल निगम आईओसीले पठाएको मूल्य सूचीअनुसार सबै प्रकारका इन्धनमा ७ रुपैयाँ महँगो र एलपी ग्यास १९ रुपैयाँ महँगो भइसकेको छ । यसै कारणले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।